Tafintohina ve ianao? | Martech Zone
Raha efa mpamaky elaela teto ianao dia fantatrao izany Tena tiako i StumbleUpon. Mitohy mahazo ny bilaogiko a mpitsidika marobe amin'ny Stumbleupon.
Raha ny fitsipika ankapobeny dia tsy tian'ny olona ianao hampiroborobo tena amin'ny pejinao toy ny StumbleUpon. aho nandefa ny lahatsoratro manokana taloha - saingy mahalana. Raha nieritreritra aho fa nampiady hevitra ity lahatsoratra ity na mety nahasarika fiheverana betsaka momba ny vokany, dia mety ho izaho ihany no mahatafintohina azy. Raha tsy izany, antenaiko fotsiny fa ho tian'ny olon-kafa ity pejy ity ary hanome azy ireo ankihibe.
Izany dia nilaza fa tsy misy maharatsy ny miverina manome ny ankihiben'ireo pejy izay efa tafintohina ao anatin'ny tranonkalanao ny hafa. Raha manandrana mikaroka ny fonenanao na tranokalao ao amin'ny StumbleUpon ianao dia hahita fa mangorakoraka ny fikarohana ataon'izy ireo ary voafetra amin'ny tag nofenoin'ny mpampiasa fotsiny.
Pejy fandraisana: Raha StumbleUpon aho dia tena nanao izany ampiharo ny Google Custom Search ho loharanom-bola.
Amin'ny alàlan'ny Google anefa dia afaka mahita mora foana ianao hoe iza amin'ireo pejin'ny tranokalanao no tafintohina mba hahafahanao manipy vato fanampiny! Ho an'ny bilaogiko dia mitady fotsiny aho:
tranokala: stumbleupon.com martech.zone
Ity dia manome ahy lisitr'ireo pejiko izay nanafintohina ny hafa hahafahako mifidy amin'ny vato hafa. Self-fanompoana? Angamba - saingy miantehitra amin'ny lalana aho fa tsy maninona satria olon-kafa efa noheverina ho mendrika an'i Stumbling.
Raha eo amin'ny StumbleUpon ianao dia aza hadino izany ampio aho toy ny namako.
Ny fiarovana ny omby?
Dec 31, 2008 amin'ny 11: 27 AM
Misaotra amin'ity lahatsoratra ity. Efa nanandrana nanao izany aho taloha fa tsy azoko tsara ny syntax Google na zavatra hafa. Ary marina ny teninao; Ny StumbleUpon dia tokony hanatsara ny fahaizan'izy ireo mikaroka. Heveriko fa mety tsara koa raha avelan'i StumbleUpon hitaky ny blôginao manokana ianao mba hahafahanao misoratra anarana amin'ny fanavaozana isaky ny misy olona tafintohina amin'ny tranokalanao manokana.
Jan 1, 2009 ao amin'ny 4: 12 AM
Google dia tsy nahita ny pejy rehetra tao amin'ny tranokalako izay natolotra ho an'ny SU.
Tahaka anao, mino mafy an'i SU aho satria izy no mitondra ny habetsahan'ny fifamoivoizana ambony indrindra amin'ny bilaogiko.
Janoary 2, 2009 amin'ny 3:13 PM
Vao avy nisoratra anarana kaonty aho satria ny rehetra dia milaza fa fomba tsara hitondrana fifamoivoizana izany. Nivezivezy teo amin'ny mombamomba ahy aho ary sahirana vao nanomboka, toa sahiran-tsaina kely. Manoro torolalana ve ianao mba hijerena sy hamaky mba hanombohana tsara indrindra sy hianarana ny fomba fampandehanana azy?
3 Novambra 2009 à 10:09
Misaotra fa tena nahasoa ny syntax google-nao. Toa manana lahatsoratra vitsivitsy ao amin'ny SU aho, saingy tsy hitako ny fifamoivoizana 🙁
4 Novambra 2009 à 4:00
Mba tena hanararaotra ny StumbleUpon, aza hadino ny milatsaka ao ary ampiasao izany imbetsaka isan-kerinandro mba hanasana ireo tranonkala izay tafintohinao. Rehefa manangana mombamomba tsara ianao dia mino aho fa hihatsara ny fiantraikany. Aza manafintohina fotsiny ny tranokalanao, na izany aza! Ho tsinontsinoavina izany.